Paolo Maldini Oo Amaanay Daafaca Amaahda Ku Jooga Ac Milan Ee Tomori
Home Horyaalka Italy Paolo Maldini oo amaanay daafaca amaahda ku jooga Ac milan ee Tomori
Fikayo Tomori of AC Milan during the Coppa Italia match at Giuseppe Meazza, Milan. Picture date: 26th January 2021. Picture credit should read: Jonathan Moscrop/Sportimage PUBLICATIONxNOTxINxUK SPI-0860-0058
Kooxda Ac Milan ayaa wali qiimeynaysa suurtagalnimada saxiixa Tomori in heshiiskiisa ay ka dhigaan mid joogtada ah maadama xiligaan qaab amaah ah ugu joogo kooxda reer talyaani.
Paolo Maldini, oo ah agaasimaha farsamada Milan, ayaa amaanay Fikayo Tomori, oo amaah uga yimid Chelsea Daafaca dhexe ayeey la saxeexay bishii Janaayo, iyadoo Maldini, laftiisu uu yahay halyeey difaac ah maalmihiisii ciyaareed sida muuqata waana taageere weyn.
Xaqiiqdii, Tomori waxaa loo xushay kulanka axada ee ay la ciyaarayaan Roma ka hor Alessio Romagnoli, oo ah daafaca aadka loo aasaasay ee San Siro. Waxana uu ahaa 23-sano jirkii afaraad ee u soo baxa kooxda.
Previous articleMilkiilaha iska leh Inter Miami CF oo sheegay inuu kooxdiisa keeni doono Messi iyo Ronaldo.
Next articleJoan Laporta oo tilmaamay in Arteta uu ku jiro Liiska tababarayasha uu doonayo hadii uu guuleysto.